आहा सलाम छ ? यी महान छोरीलाई ज’स्ले आ’फ्नो क’लेजो का’टेर दिएर बावुलाई ब’चाइन्’ – Dainik Sangalo
आहा सलाम छ ? यी महान छोरीलाई ज’स्ले आ’फ्नो क’लेजो का’टेर दिएर बावुलाई ब’चाइन्’
October 12, 2020 268
काठमाडौ। डेढ महिनाअघिसम्म काठमाडौं, हात्तीगौंडाका ५८ वर्षीय पदमबहादुर मल्ललाई खुसीका दिन आउलान् जस्तो लागेको थिएन । न त शरीर नै यति तन्दुरुस्त होला भन्ने लागेको थियो। एक वर्षअघि आफ्नो कलेजो बिग्रिसकेको थाहा पाएपछि मल्ल परिवारमा खुसी हराएको थियो।एक वर्षदेखि रक्सी सेवनका कारण कलेजोमा सिरोसिस भएपछि उनको यस्तो हविगत भएको थियो। ****सुदुर समाज ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’, *****
तर गत जेठको तेस्रो साता टिचिङ अस्पतालमा उनको कलेजो प्रत्यारोपण सफल भएकाले मल्ल परिवारमा खुसी छाएको छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा पवित्रा सुनारले लेखेकी छन्।अस्पतालका इन्ट्रोग्यास्ट्रोलोजी सर्जन डा। रमेश भण्डारीको नेतृत्वमा कलेजो प्रत्यारोपण भएको हो। उनलाई आफ्नै जेठी छोरी पुर्णी शाहीले कलेजो दान गरेकी छिन्।कलेजो दिएकी पुर्णी र पदमबहादुर दुवै खुसी देखिन्छन्, छोरी पितालाई बचाउन पाएकोमा र पदमबहादुर नयाँ जीवन पाएकोमा।
सोही क्रममा पदमबहादुरले छोरीले कलेजो दिएर आफूलाई नयाँ जीवन दिएको बताए। ‘म छोरीप्रति असाध्यै ऋणी र खुशी पनि छु,’ उनले भने। यतिखेर पदमबहादुर स्वस्थ व्यक्तिसरह सामान्य खाना खानसक्ने भएका छन्। उठेर यताउति हिँडडुल गर्न पनि।उनको स्वास्थ्य सामान्य बन्दै गएकाले डिस्चार्ज गरिसकेको उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. रमेशसिंह भण्डारीले बताए। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत कलेजो दिने छोरी र बाबु दुवैलाई डिस्चार्ज गर्न पाएकोमा आफूलाई ठूलो आनन्द मिलेको जनाए।‘मलाई आज धेरै आनन्द मिलेको छ।
पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण पूर्ण सफल भएको छ, कलेजो लिनेदिने दुवै डिस्चार्ज भएका छन्,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। उनले फेसबुकमै कलेजो प्रत्यारोपणमा सहयोगी चिकित्सक समूहलाई धन्यवाद दिएका छन्।डा।भण्डारीका अनुसार स्वस्थ व्यक्तिको सानो टुक्रा कलेजो काटेर कलेजो सिरोसिस भएको व्यक्तिमा राखिने प्रक्रिया हो कलेजो प्रत्यारोपण।
रक्सीसेवन या अन्य कारणले कलेजो पूरै बिग्रेको अवस्थामा प्रत्यारोपण गरिन्छ।डा. भण्डारीका अनुसार स्वस्थ व्यक्तिको सानो टुक्रा कलेजो काटेर कलेजो सिरोसिस भएको व्यक्तिमा राखिने प्रक्रिया हो कलेजो प्रत्यारोपण। रक्सीसेवन या अन्य कारणले कलेजो पूरै बिग्रेको अवस्थामा प्रत्यारोपण गरिन्छ। कलेजो प्रत्यारोपण भएका पदमबहादुर स्वस्थ बनिसकेका छन्।तर पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्थामा आउन थप तीन महिना लाग्नेछ।
यसका लागि उनले पूर्ण हेरचाहमा बसेर संक्रमणबाट बच्नुपर्नेछ। चिकित्सकको सल्लाहअनुसार फलोअपमा आउनुपर्नेछ। डा. भण्डारीले टिचिङमा कलेजो प्रत्यारोपणका लागि विगत पाँच वर्षदेखि प्रयास गरेका थिए। उनकै नेतृत्वमा यो अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपण सफल भएको हो।उता कलेजो प्रत्यारोपण गरेर नयाँ जीवन पाएको भन्दै पदमबहादुर र पुर्णीले पनि अस्पतालका चिकित्सक तथा नर्सलाई आभार प्रकट गरेका छन्।
एक वर्षदेखि पदमबहादुर कलेजो सिरोसिसका कारण थलिएर पेट फुलेको र खाना खान नसक्ने अवस्थामा थिए। दिसासमेत रोकिन्थ्यो।
सुरुमा ओम अस्पताल पुगेका मल्ल पछि टिचिङ पुगे।मल्ललाई सुरुमा टिचिङमा कलेजो प्रत्यारोपण हुने कुरा थाहा थिएन। उनी भारत जानुपर्ने सोचले दुःखी थिए। यसै क्रममा ओम अस्पतालका डाक्टर राहुल पाठकले टिचिङमा कलेजो प्रत्यारोपण हुने र डा. भण्डारीलाई भेट्न सल्लाह दिए र उनले एक महिनाअघि डा। भण्डारीलाई भेटे।
डा. भण्डारीले प्रक्रिया अघि बढाए।उनले परिवारका अन्य सदस्यहरूको रगतको क्रसम्याच गरे। जसमा जेठी छोरी पुर्णीको मिल्यो। उनी तत्कालै दिन तयार भइन्। कलेजो प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक २५ लाख रुपैयाँ आफन्तकै सहयोगमा जुट्यो।सोही क्रममा गत जेठको तेस्रो साता उनमा कलेजो प्रत्यारोपण भयो। विदेश जानुपरेको भए प्रत्यारोपण खर्च दोब्बरभन्दा धेरै पथ्र्यो। नेपालमै भएकाले कम खर्चमा प्रत्यारोपण सफल भएको मल्लले बताए। उनका अनुसार सम्पूर्ण खर्च २५ लाख रुपैयाँ लागेको छ। पत्रपत्रिका/अनलाईनहरु
Prevदशैंलाई लक्षित गर्दै प्रहरीले थाल्यो ‘कर्डन एण्ड सर्च अप्रेशन
Nextनागरिक संवेदनशील नभए सरकार फेरि लकडाउन गर्ने : मन्त्री ज्ञवाली
भा’रततिर लै’जा’दै ग’रेकी १७ ब’र्षि’या यु’व’तीलाइ…उद्धार
एमाले र माओ’वादी केन्द्र अब पुरानै बाटोमा : ओलीको १२१ र प्रच’ण्डको ५३ सिटको हैसि’यतमा रहने सम्भावना
‘ससुरा र श्रीमान्ले बला’त्का’र गरे, अरुलाई पनि ल्याएर अनैतिक काम गर्न लगाए’
बैतडीमा कलेज हिँडेकी किशोरीको शव जंगलमा यस्तो अवस्थामा भेटियो, कसरी भयो उनको मृत्यु? (126355)
यस्ता थिए लाहुरे र स्मिताका रमाइला टिकटक जुन यादमै सिमित रहेदेशै रुवायो हेर्नुस भिडियो (96689)
दुबई का’ण्ड भन्दै यी युवतिको हेर्नै नसकिने ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस) (73786)
जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोला ! (68993)
हेर्नुस्, नेपाली सेनाको यस्तो क:’ठोर….. ; जुन भिडियो अहिले संसारभरी भाइरल भइरहेको छ (भिडियो हेर्नुस) (54882)
समाचार युवा नेता रामकुमारी झाक्री घा’इ’ते युवाहरु आ’क्रो’शित ( हेर्नुहोस् भिडियो ) (43689)
कन्चन निभेपछि आमाको यस्तो दयनिय अवस्था , छैन आमाको होस्😰😰